Miady ny lalao an-tserasera
ny safidy maro ny ady lalao, ary afaka milalao azy ireo maimaim-poana. Afaka miady tanana ny tànany na ny fiadiana ny tenany amin'ny nify. Ny fahavalo ho mendrika foana ny – Tsy miala sasatra. Manohitra ny tenanao ao amin'ny kianja filalaovana ny fanatanjahan-tena, peratra Gladiatera, amin'ny ady eny an-dalambe. Satria ny ady, manana ny fahaiza-manao kely indrindra, fa tsy ny ho ela – tsy ho ela dia hanana fahafahana hanatsara fampisehoana. Rehefa ampy ny tantara tsirairay mahazo vola iray, izay miankina amin'ny vokatry ny ady. Ento ary ho hameno ny fahasalamana, charme, fiarovana sy ny fitaovam-piadiana. Ary tonga ny fotoana manao zavatra, mba handresy tokoa.
Kogama: PVP tena izy
Iron Panther an'ny polisy
Lalao ady lalao tamin'ny Category:
Kintana ady totohondry
Power Rangers Noely mihazakazaka
Knights of Qwert
League of Darkness: Scarecrow
Games ady - Fa ny tena mavitrika mpilalao Asaina hilalao ao amin'ny ady lalao
Lalao Online Miady ny lalao an-tserasera
Mitolona lalao maimaim-poana - fialam-boly tsara indrindra any
Amin'izao lalao, dia azo atao ny zava-drehetra sy ny zava-drehetra no namela. Hiady amin'ny totohondry sy ny tongotra, fampiasana fitaovam-piadiana, hiady amin'ny mpampijaly kely ny tenany, na hanafika ny mpandalo. Eto dia tsy miampanga ny tsy rariny, fa nisy hery ny marina. Na ny mpanao politika sy ny sarimihetsika kintana aza tsy fahoriana lehibe, raha misy zavatra tsy araka ny endriny. Manomboka ny ady eo amin'ny lalao kilalao, fotsiny mifidy ny fahavalo.
Mandehana mamaky ny fizarana
Miaraha ny Ninja sy nampiofana fananana nunchaku, sabatra, ary ny singa ny haiady. Ireo miaramila saro-takarina hampiofanana nandritra ny taona maro mba ho lasa tena fiara mpamono. Ianao mila maka fotsiny tsotra vitsivitsy ambaratonga, mba hanatratrarana ny tonga lafatra. Ninja ve ianao sokatra, izay mampianatra sensei mpisintaka. Tsy mandà tsy hikarakara sy ianao, ary rehefa vonona ianao, mandehana miaraka amin'ny herim-po efatra sokatra nanala ny fahavalo ambanin'ny tany labyrinths sy ny tanàn-dehibe sahalava.
Ady Super Heroes mampientam-po, satria manana hery tsy mahazatra. Open Ady Lalao misesy, ary ho lasa matanjaka, Nimble, fifadian-kanina sy tsy nanan-tahotra boky tantara an-tsary toetra. Hiaina ny herin'ny andriamanitra tantanana Thor, Kapiteny Amerika fanampiana fifanarahana amin'ny milina, ary Batman mba handresy biby goavam-be. Litera sarimiaina sy ny Manga ihany koa nasaina mba hilalao ao amin'ny ady. Megamen, Naruto, Ben 10 ary maro ny tovolahy nivoaka mba hiady sy handresy. Ao ny fitaovam-piadiana maoderina fitaovam-piadiana sy ny mazia, fa tena zava-dehibe - dia feno tsara obstinacy manohitra izay tsy manohitra ny fahavalo misoko mangina.
Ny vahiny no manafika! Azo atao ve ny hijanona eo amin'ny tsisiny, raha ny izao tontolo izao dia efa hirodana? Hitarika ny miodina amin'i mpanafika, ary asaivo nesorina tany amin'ny planeta aoriana. Ary ny hiatrika asa sarotra toy izany, manao fonon-tanana ka mankanesa any amin'ny ady totohondry peratra izay efa fanamby goavana indrindra mpifaninana.
Sports lalao maimaim-poana toy ny ady dia tafiditra ao amin'ny haiady na fotsiny mifidy-dalana ho any Olaimpika avo. Eto dia azo atao ny mamerina ny SAINA FANETRI-BEN'NY ny Jackie Chan, Rimbaud, manaova fotoana ady totohondry amin'ny zombies, snowmen sy ny ombivavy. Sumo tolona ary samy hafa, nefa koa mahaliana. Ao amin'ny tranga voalohany, nanosika ny saborany olona ao amin'ny faharoa - ny mpandray anjara nampiseho tena fampisehoana.
Nefa maro ny foto-kevitra ara rakotra ao amin'ny fizarana, ka azo zaraina ho sokajy:
Ny ady fahiny: ny olona faran'izay tsotra sy ny Gladiatera
Battle ny Moyen Knights
ny fi, Fantasy sy mifono zava-miafina ady
milalao lalao ady tsy reraka ny
ny ankizilahy tia mandrakariva azo ampitahaina hery, na dia tsy nanana fahafahana hilalao lalao eo amin'ny solosaina ady. Primitive zazalahy manaikitra sy Scratch, nilanja punches amin'ny ny hafa amin'ny kibay. Fahagola ankizilahy dia niady tamin'ny hazo sabatra, manao ady sy fitaovam-piadiana, dia toy izany no miomana ho tonga miaramila. Taona virtoaly niova ady - ao amin'ny Mazava ho azy indray dia sabatra, maces sy ny totohondry. Angamba zavatra niova ankehitriny? Te ho gaga ianao, fa saiky mbola toy izany koa ny zava-drehetra, afa-tsy izao hiady kokoa ao amin'ny tontolo virtoaly izay ny mpilalao dia tsy hanimba izany ary mijaly ny bots ihany.
Fidio ny simulator amin'ny zava-misy hetsika sy ny tselatra vokatra. Na aiza na aiza misy lafiny tsara tarehy sy ny samy hafa fahafahana. Maro fihodinana na ambaratonga mila ho tafavoaka velona eo amin'ny lalao, ka mahatonga fahavoazana ho an'ny mpanohitra sy ny lalao baolina teboka ambony indrindra sy nametraka ny firaketana an-tsoratra.